1 Makoronike 26 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga reMakoronike 26:1-32
Mapoka evarindi vepamagedhi (1-19)
Vachengeti vepfuma nevamwe vatungamiriri (20-32)
26 Aya ndiwo aiva mapoka evarindi vepamagedhi:+ kwaKora kwaiva naMesheremiya+ mwanakomana waKore wekuvanakomana vaAsafi. 2 Mesheremiya aiva nevanakomana ava: Zekariya ndiye aiva dangwe, Jedhiyaeri ari wechipiri, Zebhadhiya ari wechitatu, Jatinieri ari wechina, 3 Eramu ari wechishanu, Jehohanani ari wechi6, Erieho-enai ari wechi7. 4 Obhedhi-edhomu aiva nevanakomana ava: Shemaya ndiye aiva dangwe, Jehozabhadhi ari wechipiri, Joa ari wechitatu, Sakari ari wechina, Netaneri ari wechishanu, 5 Amieri ari wechi6, Isakari ari wechi7, uye Peuretai ari wechi8; nekuti Mwari akamukomborera. 6 Mwanakomana wake Shemaya akabereka vanakomana vakanga vari vatongi veimba yababa vavo, nekuti vaiva varume vaiva nesimba vaivimbwa navo. 7 Vanakomana vaShemaya vaiva: Otini, Refaeri, Obhedhi naErizabhadhi; uye hama dzake Erihu naSemakiya dzaivawo varume vaivimbwa navo. 8 Vese ava vaiva vekuvanakomana vaObhedhi-edhomu; ivo nevanakomana vavo nehama dzavo vaiva varume vaivimbwa navo, vakakodzera kushumira, uye vaiva 62 vekwaObhedhi-edhomu. 9 Mesheremiya+ aiva nevanakomana nehama dzake, varume 18 vaivimbwa navo. 10 Hosa wekuvanakomana vaMerari aiva nevanakomana. Shimri ndiye aiva mukuru, nekuti baba vake vakamugadza kuti ave mukuru wavo kunyange zvazvo akanga asiri dangwe, 11 Hirikiya ari wechipiri, Tebhariya ari wechitatu, Zekariya ari wechina. Vanakomana vese vaHosa kubatanidza nehama dzake dzese vaiva 13. 12 Pamapoka aya evarindi vepamagedhi, vakuru vavo vaiva nemabasa sezvakanga zvakangoitawo hama dzavo, kuti vashumire paimba yaJehovha. 13 Saka vakakanda mijenya,+ pasinei nekukura kwedzimba dzemadzibaba avo, kuti vave nemagedhi ekurinda. 14 Mujenya wekumabvazuva wakabva wabuda uri waSheremiya. Vakakanda mijenya kuti vaone kwaizoenda mwanakomana wake Zekariya, chipangamazano aiva neungwaru, mugove wake ukabuda uri wekuchamhembe. 15 WaObhedhi-edhomu waiva kumaodzanyemba, uye vanakomana vake+ vakanzi vashandire kumatura. 16 WaShupimu naHosa+ waiva kumavirira pedyo neGedhi reShareketi pedyo nemugwagwa mukuru unokwidza kumusoro, rimwe boka revarindi riri kudivi rekuno, rimwe riri kune rimwe divi; 17 kumabvazuva kwaiva nevaRevhi 6; kuchamhembe kuine vaRevhi vana zuva rimwe nerimwe uye kumaodzanyemba kwaiva nevaRevhi vana zuva rimwe nerimwe; uye pamatura+ paiva nevaviri vaviri; 18 kunzvimbo yaiva nedenga yaiva kumavirira kwaiva nevaRevhi vana pamugwagwa mukuru,+ uye vaviri panzvimbo yaiva nedenga. 19 Aya ndiwo akanga ari mapoka evarindi vepamagedhi vekuvanakomana vaKora nevekuvaMerari. 20 KuvaRevhi, Ahija ndiye aiona nezvemaichengeterwa pfuma yeimba yaMwari wechokwadi nemaichengeterwa pfuma yezvinhu zvakatsveneswa.*+ 21 Pavanakomana vaRadhani, kureva vanakomana vemwana wekwaGeshoni, paiva naJehiyeri+ uyo aiva mumwe wevakuru vedzimba dzemadzibaba ekwaRadhani 22 uye vanakomana vaJehiyeri, Zetamu nehama yake Joeri. Ndivo vaiona nezvemaichengeterwa pfuma yeimba yaJehovha.+ 23 KuvaAmramu, nevaIzihari, nevaHebroni, nevaUzieri,+ 24 Shebhueri mwanakomana waGeshomu mwanakomana waMozisi aiva mutungamiriri aiona nezvematura. 25 Kuhama dzake, kwaEriyezeri,+ kwaiva nemwanakomana wake Rehabhiya,+ mwanakomana wake Jeshaya, mwanakomana wake Joramu, mwanakomana wake Zikri, uye mwanakomana wake Sheromoti. 26 Sheromoti uyu nehama dzake ndivo vaiona nezvemese maichengeterwa pfuma yezvinhu zvakatsveneswa,+ zvakanga zvatsveneswa naMambo Dhavhidhi+ nevakuru vedzimba dzemadzibaba,+ nevakuru vezviuru nevemazana, nevakuru veuto. 27 Vakanga vatsvenesa zvinhu zvaibva kuhondo+ nezvakanga zvapambwa+ kuti vagadziridze imba yaJehovha; 28 uyewo paiva nezvese zvakanga zvatsveneswa nemuoni+ Samueri, naSauro mwanakomana waKishi, naAbhineri+ mwanakomana waNeri, naJoabhi+ mwanakomana waZeruya.+ Chinhu chese chaitsveneswa nemunhu chaiiswa mumaoko aSheromiti neehama dzake. 29 PavaIzihari,+ Kenaniya nevanakomana vake havana kupiwa basa paimba yaMwari asi vakagadzwa kuva vatungamiriri nevatongi+ muIsraeri. 30 PavaHebroni,+ Hashabhiya nehama dzake, varume 1 700 vaivimbwa navo, vaitungamirira vaIsraeri munharaunda yekumavirira kwaJodhani pabasa rese raJehovha nebasa ramambo. 31 PavaHebroni, Jerija+ ndiye aiva mukuru. Mugore rechi40 rekutonga kwaDhavhidhi+ pakati pavo pakatsvagwa varume vaiva nesimba uye vakashinga, vachibva vawanikwa muJazeri+ yaiva muGiriyedhi. 32 Hama dzake dzaiva varume 2 700 vaivimbwa navo, vari vakuru vedzimba dzemadzibaba. Saka Mambo Dhavhidhi akavagadza kuti vatungamirire vaRubheni, vaGadhi, nehafu yedzinza revanhu vekwaManase pazvinhu zvese zvaiva nechekuita naMwari wechokwadi nezvaiva nechekuita namambo.
^ Kana kuti “yezvinhu zvakatsaurwa.”
1 Makoronike 26